နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: 2010
နှစ်သစ်အကြို နှစ်သစ်ကူးသီချင်းလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အားလုံးပဲ Happy New Year ပါ။
Auld Lang Syne လို့ အမည်ရပါတယ်။
Auld Land Syne "Happy New Year"
ရေးသားသူ Ko Boyz at 8:24 PM5ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
"Yorm" by Hin - Lek - Fai
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၇-၁၈ နှစ်လောက်တုန်းက ကြိုက်မိခဲ့တဲ့ ယိုးဒယား စလိုးရော့်ခ် သီချင်း တစ်ပုဒ်ပါ။ သီဆိုတဲ့ အဖွဲ့ကတော့ Stone, Metal, Fire ဆိုပြီး နာမည်မှည့်ထားတဲ့ SMF အဖွဲ့ပေါ့။ ယိုးဒယားလို “ဟင်လိတ်ဖိုင်း” ဆိုပြီး နာမည်ကြီးပါတယ်။ နောက်တော့လဲ နာမည်ကြီးတဲ့ အဖွဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲ ဇာတ်ခေါင်းကွဲသွားတာပဲ...။
၂၀၀၃ လောက်မှာ ပြန်ပေါင်းထုပ်ဖြစ်သေးတယ် ထင်ပါရဲ့...။
အခုတော့ ကိုယ်ကြိုက်မိတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ယူထု ကျေးဇူးနဲ့ ပြန်နားထောင်လိုက်ရလို့ မျှဝေပေးလိုက်တာပါ။
သီချင်းလေး နာမည်က "Yorm" လို့ အမည်ရပါတယ်။ အရှုံးပေးပါတယ် လို့ ဘာသာပြန်ရင် ရမလားမသိဘူး။ မင်းလုပ်သမျှ ခံယူမယ် လို့လဲ ပြန်နိုင်သေးတယ်။
သီချင်းလေးက နားထောင်ကောင်းသလို အဓိပ္ပါယ်ကလဲ ကောင်းတယ်။
အတိုချုံးပြောရရင် ကိုယ့်ချစ်သူကောင်းစားရေးအတွက် အရာရာကို အစွန့်လွတ်ခံ အနစ်နာခံသွားတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် အကြောင်းကို ဖွဲ့ထားတာ။
ကဲပါ.. သီချင်းလေးကို နားထောင်ကြစို့လား...။
အောက်ကဗားရှင်းက MTV, Karaoke ဗားရှင်းပေါ့လေ။
ဒီအောက်က ဗားရှင်းကတော့ လိုက်ဖ်ရှိုးမှာ သူတို့ ပြန်ဆိုထားတဲ့ သီချင်း။ အသက်သာ ကြီးလာတယ်။ ဗိုကယ်ပါဝါက မကျသေးဘူး။ လေးစားတယ် ဆရာ...။
နောက် ဒီသီချင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထပ်ရှာလိုက်တော့ Unplugged Version ပါ တွေ့လာတယ်။ တယောတွေ၊ Violin တွေ၊ စန္ဒယားတွေ၊ Piano တွေ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ တီးထားပြီး အဆိုပိုင်းကို ဗားရှင်းလေး မဆိုစလောက် ပြောင်းဆိုထားတာ သဘောကျတယ်ဗျာ...။
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ.. ဟုတ်ပါတယ်။ အဲဒါ အာဇာနည်က ပြန်ဆိုထားတဲ့ “စည်းတစ်ဖက်ခြား” ဆိုတဲ့ သီချင်းပါ။ နောက်မှ သတိရမိလို့ အာဇာနည် ဗားရှင်းပါ တင်ပေးလိုက်တယ်။ ကျေနပ်တော့နော အာကြီးပန်ကာတွေ...။ :D
စာကြွင်း ။ ။ အာကြီးပန်ကာ = အာဇာနည် Fan
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:14 PM6ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: song, Thai
လျှော်လိုက်စမ်းဟဲ့ ဟိုအရပ်က ဟိုအပင်အောက်မှာ
ဒီလထဲ အနောက်အရပ်ကို မသွားနဲ့
အလှူကို နောက်လထဲမှ လုပ်မယ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 3:21 PM4ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ချစ်ဖွယ်သော ပီယဝါစာ စကား* ကို ဆိုတတ်သော
ပျိုမျစ်နုနယ်သော အဆင်း ကို ပိုင်ဆိုင်သော
လှပသေသပ်သော နှုတ်ခမ်း ပိုင်ရှင်
ရှုမငြီးသော ရုပ်သွင် ကို ပိုင်သသူ
ယနေ့သည်ကား အသင့်၏ မွေးနေ့ဖြစ်ပေသည်။
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေသတည်း။
*ကိုကို့ကို မီးမီး တစ်အားချစ်တာပဲ ။
You Belong To The Zoo!
You Are Monkey and Donkey!
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:28 AM7ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: Birthday, Emotions
ပုဂံမင်းဆက်တွေထဲက တစ်ဆက်ရဲ့ နာမည်မှည့်ပုံလေး။ အဖေ့နာမည်နောက်ဆုံးကို သားက အရှေ့မှာ မှည့်တာ...။
ရှမ်းရာဇဝင်/သမိုင်း တစ်ခုမှာ ဖတ်ရတာကတော့ သူတို့ဟာ ရှမ်းဘုရင်တွေပါတဲ့။
နာမည်က မြန်မာနာမည်တွေ မဟုတ်သလိုတော့ ထင်သား။
၁။ ထီးမင်းယဉ် = ထီးမိန်းယိန်
(ထီး = စိုင်းထီးဆိုင်ထဲက ထီးလို အဓိပ္ပါယ်ပဲ မေ့သွားပြီ။ မိန်း = နိုင်ငံ၊ ယဉ် = ငြိမ်းချမ်းသာယာခြင်း။ ငြိမ်းချမ်းသာယာသော နိုင်ငံက ထီး အရှင်သခင်ပေါ့လေ)
၂။ ယဉ်မင်းပိုက် = ယိန်မိန်းပက်
(ယိန်=ငြိမ်းချမ်းသာယာခြင်း၊ မိန်း= နိုင်ငံ၊ ပက်= ထင်းရှုးဆီ။ ငြိမ်းချမ်းသာယာသော ထင်းရှုးနိုင်ငံများ ဘုရင်လား မသိ)
၃။ ပိုက်သေလဉ် = ပက်ဆေလိုင်း
(ပက် = ထင်းရှုး၊ ဆေ = ကျား၊ လိုင်း = ရောင်စုံအစင်း။ ထင်းရှုးတော ရောင်စုံကျားဘုရင် ???)
၄။ သေလဉ်ကြောင် = ဆေလိုင်းစဝ်
(ဆေ=ကျား၊ လိုင်း= ရောင်စုံ/အစင်း၊ စဝ်= အရှင်သခင် ရောင်စုံကျား အရှင်)
၅။ ကြောင်ဒူရာဇ် = စဝ်ဒူရာဇ်
(ဒီနေရာရောက်တော့ သမိုင်းစာအုပ်က ပိုးစားထားလို့ ဖတ်လို့မရတော့ဘူး။)
ပု၊ပင်း၊ အင်း၊ တောင်၊ ညောင်ရမ်းနောင်၊ကုန်းဘောင် နှစ်ခေတ်ခွဲ ဆိုတဲ့ စကားစု မှာ ပါတဲ့ ပင်းယ နဲ့ အင်းဝခေတ်မှာ ဘုရင်အများစုက ရှမ်းဘုရင်တွေပါတဲ့။ (၁၆ ရာစုလောက် ဖြစ်မယ်။)
ရှမ်းညီနောင်သုံးပါးတို့၊ သိုဟန်ဘွားတို့၊ တစ်သက်မှာ သုံးခါသာ ပြုံးတဲ့ သီလဝ မင်းတို့။
သိုဟန်ဘွားကတော့ ရဟန်းဘုန်းကြီးတွေကို သတ်တယ်လို့ နာမည် အဖျက်ခံရပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ ရှမ်းတွေလောက် ဗုဒ္ဓဘာသာကို အလေးအမြတ်ထားတာ ရှမ်းတွေပဲ ရှိတော့ ရှမ်းဘုရင်ကနေ ဘုန်းကြီး၊ ရဟန်း၊ သံဃာတွေကို သတ်တယ်ဆိုတာ သိပ်တော့ လက်မခံချင်ပါ။
နာမည်မှည့်တာကနေ ဘုရင်တွေ နိုင်ငံတော်တွေ အကြောင်း ရောက်သွားတယ်။ နောက်မှ အလျဉ်းသင့်သလို ထပ်မံ ဖော်ပြပါ့မယ်။
ငယ်ငယ်က ဖတ်ဖူးခဲ့တာမို့လို့ ဒီသဘောအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် ပေါက်တယ်လို့ မှတ်ယူမိပါတယ်။
အကောက်အယူလွဲပါက ကျွန်တော့်ရဲ့ မှတ်ဉာဏ်အား ချို့တဲ့မှုကို အပြစ်တင်နိုင်ပါတယ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 9:40 AM 18 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: bagan, history, name, shan
iPhone Warranty : Applecare Protection Plan
မနှစ်က ဝယ်ထားတဲ့ အိုင်ဖုန်းလေး အခုလထဲမှာ အာမခံကာလ တစ်နှစ်က ပြီးတော့မယ်ဆိုတာ သိလို့ Apple Store ကနေ AppleCare Product Plan ဆိုတာလေး ဝယ်လိုက်တယ်။ နောက်တစ်နှစ်အထိ အာမခံ ရှိသွားတာပေါ့။ အိုင်ဖုန်းနဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေ Hardware ပိုင်း၊ software ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာ တက်လာရင် Apple ကနေ တိုက်ရိုက် support လုပ်ပေးနိုင်မယ့် plan လေးပေါ့။
အိုင်ဖုန်းဝယ်တုန်းက ဒီ package လေးကို ဝယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ၃၀% ဈေးလျှော့ပေးပါတယ်။ မဝယ်ဖြစ်လိုက်လို့ ပထမ အာမခံကာလ တစ်နှစ်အတွင်းမှာ ဒီပက်ကေ့ခ်ျကို ဝယ်မယ်ဆိုရင် ပထမ အာမခံတစ်နှစ် ပြည့်သွားရင် နောက်တစ်နှစ် extend လုပ်ပေးပါမယ်။ အိုင်ဖုန်းစစချင်း ဝယ်ရင်တော့ နှစ်နှစ်အာမခံ ရတဲ့ သဘောပေါ့။
One to one exchange ရမရတော့ မသိဘူး။ လောလောဆယ်တော့ ၉၉ ကျပ် ထွက်သွားပြီ။ နောက်တစ်နှစ်အတွက် အာမခံ စိတ်ချရသွားပြီ။
Apple Product အားလုံးကို တစ်ခုချင်းစီအတွက် ဒီ AppleCare Product Plan က အကျုံးဝင်ပါတယ်။
iPhone အတွက် Applecare Protect Plan ဝယ်ချင်ရင် ဒီလင့်ခ်ကနေ သွားလိုက်ပါ။
တစ်ခြားသော Apple Product များအတွက် Applecare Protection Plan ဈေးနှုန်းလေးတွေ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
MacBook / MacBook Air /...
Apple TV - AppleCare...
iMac - AppleCare...
Mac mini - AppleCare...
iPod touch/iPod classic -...
ရေးသားသူ Ko Boyz at 3:57 PM6ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
My Wish list for this Christmas 2010
5. Sony Camcorder HDR-CX550E
6. Sony PS3-Slim
Sony PS3-Slim 320GB
7. Nexus S
Wishlist က များသွားလား မသိဘူး။ အဟင်း....။
ဝယ်ပေးချင်ရင် ခုကတည်းက ကြိုစာရင်းပေးထားနော်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 5:22 PM 10 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
How to use "Places" on FaceBook in iPhone with "HotSpotShield"VPN
အိုင်ဖုန်းထဲက ဖေ့ဘွတ်မှာ ''Places'' ဆိုတဲ့ function ပါလာတာ သုံးလလောက် ရှိနေပါသည်။
By default အရ အမေရိကားနိုင်ငံ တစ်ခုပဲ သုံးလို့ရပါသေးတယ်။
အမေရိကားပြင်ပ နိုင်ငံမှာ သုံးလို့ မရသေးပါဘူး။
လောလောဆယ်တော့ စလုံးမှာတော့ သုံးလို့ရအောင် နည်းလမ်းတစ်ခု တွေ့ထားပါတယ်။
အဲဒါကတော့ HotspotShield VPN ကို ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာ Add လုပ်ဖို့ လို့ပါတယ်။
ကျွန်တော် လက်ရှိ စမ်းသပ်ပြီး သုံးနေတာပါ။ (စလုံးအပြင် တစ်ခြားသော အမေရိကန် ပြင်ပနိုင်ငံများက ဒီနည်းကို သုံးရမရ စမ်းသပ်ကြည့်ပြီး အကျိုးအကြောင်း လာရေးပေးပါဦး။)
အောက်က ပေးထားတဲ့ လင့်ခ်အတိုင်း လုပ်ပေးဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
How to set up VPN to use "Places" in iPhone's FaceBook.
Username နဲ့ Password ကို မေးလာရင် Step2နားက "Account ID" ကို ကလစ်ခေါက်လိုက်ပါ။ စက်က username နဲ့ password ကို အော်တို generate လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
setup configuration များ ပြီးဆုံးသွားလို့ရှိရင်တော့ Wifi နဲ့ VPN ကို ON ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ VPN logo လေးက ဖုန်းရဲ့ ညာဘက် အပေါ်ထောင့်မှာ ပေါ်နေပါမယ်။ အဲဒါလေး ပေါ်နေရင်တော့ Places ကို သုံးလို့ ရသွားပါပြီ။
VPN ကို တောက်လျှောက် ON ပေးတဲ့ အတွက် ဖုန်းဘက်ထရီတော့ ကုန်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့်လို့ External iPhone Battery ဖြစ်တဲ့ Energizer ကို ဝယ်ထားရင်တော့ Battery ကိစ္စ ခေါင်းစားစရာ မလိုပါဘူး။
စာကြွင်း။ ။ အထက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များ အရင်းအမြစ်၊ သတင်း စစ်မှန်မှု၊ စမ်းသပ်သုံးစွဲခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အကျိုးအပြစ် တို့သည် စာရေးသူ၌ တာဝန်မရှိကြောင်း....။ (ဟိ ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံပဲ)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 2:35 PM7ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: facebook, iPhone, IT, tech
iPhone apps: Viber
အိုင်ဖုန်းထဲမှာ သုံးထားတဲ့ apps တွေထဲက ကောင်းတာလေး တစ်ချို့ကို ဝေမျှချင်လို့ပါ။
ဒီ apps က ဖုန်းအစားထိုးပြောလို့ရတယ်လို့လဲ ပြောလို့ရတယ်။ သူက skype လိုမျိုးပဲ။ တစ်ခု ပိုကောင်းသွားတာက skype လို account တစ်ခု သတ်သတ် ရှိစရာ မလိုဘူး။ အဲဒီ apps ကို Install လုပ်ပြီး run လိုက်တာနဲ့ သူက ကိုယ့် contact ထဲက ရှိတဲ့ လူတွေထဲက အလားတူ Viber apps သုံးတဲ့ လူတွေဆီကို တန်းခေါ်လိုက်လို့ရတယ်။ သူက Wifi, 3G network ကနေတစ်ဆင့် အလုပ်လုပ်တာမို့လို့ အချိန်မရွေး သုံးစွဲနိုင်တဲ့ အနေအထားပါ။ ကိုယ့်မှာတော့ Data Plan တော့ ရှိဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ စင်ကာပူက iPhone သုံးစွဲသူ အများစုကတော့ ပလန်စယူကတည်းက 12GB Data Plan ပါတဲ့ ပလန် အမျိုးအစားကို ယူကြတာ များတော့ ဒေတာ သုံးစွဲမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်စရာ မလိုပါဘူး။ တစ်ခြားသော နိုင်ငံက သုံးစွဲသူတွေတော့ ဒေတာ ပလန်ကို သေချာ စိစစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ (ဒေတာပလန်နဲ့ ပတ်သက်လို့ စလုံးက တစ်ခုကောင်းတာက တစ်လတစ်လကို 12GB အထိ အများဆုံး ပေးသုံးထားပါတယ်။ ပိုရင်လဲ ပိုသလောက်ပေးရပြီး အပိုကြေးကို အများဆုံး ဒေါ်လာ ၃၀ အထိပဲ ပေးရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ တစ်လတစ်လ ဖုန်းက ဒေတာတွေ သုံးတာ 4GB တောင် မရှိဘူး။)
အခု Viber ကတော့ သူ့ကို ပိတ်ထားရင်လဲ Viber ကနေ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းက ဖုန်းဆက်လာရင် မြည်ပါတယ်။ Background မှာ run မနေရင်တောင် push notification နဲ့ alert ပေးပါတယ်။ Battery power စားသုံးမှု အလွန်နည်းပါတယ်။ Viber use ကနေ Viber user အချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်တာ ဖရီးပါ။ ကိုယ့် contact list ထဲက နံပါတ်ကို သုံးပြီး ခေါ်တာပါ။ နိုင်ငံရပ်ခြားက Viber User ကို ခေါ်လဲ ဖရီးပါပဲ...။ သုံးသင့်တဲ့ application တစ်ခုမို့လို့ မျှဝေလိုက်တာပါ။
Download လုပ်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ apple apps store ကနေ search အောက်မှာ Vibre free ဆိုတာကို ရိုက်ပြီး ရှာလိုက်ပါ။ နောက် Install လုပ်လိုက်တာနဲ့ တန်းသုံးလို့ ရပါပြီ။ Install လုပ်ပြီး နောက်ပိုင်း ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်အမှန်ကို တောင်းလာရင် ပေးလိုက်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ Activation code ကို ကိုယ့်ဖုန်းဆီကို မက်ဆေ့ခ်ျ အနေနဲ့ ပို့လာမှာ မို့လို့ပါ။
နိုင်ငံရပ်ခြားကို ဖုန်းခေါ်ဆိုခ မကုန်ပဲ အလွယ်တကူ ခေါ်နိုင်ကြပါစေ။
Viber website ကနေ apps ကို download လုပ်နိုင်သလို iTunes ကနေ ဒီလိပ်စာနဲ့လဲ Download လုပ်နိုင်ပါတယ်။
၁။ iOS 4.xx သွင်းထားတဲ့ iPhone 3GS/ iPhone4တွေမှာ ပိုပြီးတော့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် အလုပ်လုပ်တာ တွေ့ရပါတယ်။
ှ၂။ မရှင်းတာရှိရင် ဒီလင့်ခ် ကနေ ဝင်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
(ကြော်ငြာခ မရပါ။ အသုံးဝင်လို့သာ မျှဝေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ apps ကို သုံးစွဲခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အကျိုးအပြစ်များကို စာရေးသူမှ တာဝန်မယူပါကြောင်း.....။)
Languages: English, Chinese, French, German, Japanese, Russian, Spanish
© Viber Media, Inc.
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:08 AM7ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: iPhone, Telecommunication, viber
Me & iPhone
အိုင်ဖုန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စုံစီနဖါလေးတွေပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ SITEX2010 တုန်းက အိုင်ဖုန်းနဲ့ ပတ်သက်တာလေးတွေ သေးသေးကွေးကွေး သွားဝယ်လာတယ်။
၁။ Sony MW600 Wiress Earphone
ဒီဆိုနီ နားကျပ်အတွက် ၇၉ ကျပ် ပေးရတယ်။ ဝယ်ထားတာ အဖြူရောင်လေ။ အနက်ရောင်ဆို ၆၉ ကျပ်ပဲ။
၂။ Energiser Power pack for
သူက ၁၂၉ ကျပ် ရောင်းတာကို ၆၉ကျပ်နဲ့ ရလာတယ်။ 1500 mA ပဲ... အနည်းဆုံးတော့ ၁၀၀% တော့ ထပ်သုံးရတာပေါ့။
နောက် စတားဟပ်ကို သွားပြီးတော့ နဂိုအိုင်ဖုန်းနားကျပ် ပျက်နေတာကို ဝါရန်တီကလိမ်း သွားလုပ်လာတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်လောက်တုန်းက သွားတော့ နားကျပ်စတော့ ကုန်နေလို့တဲ့။ စတော့ဝင်လာရင် ဖုန်းဆက်ပေးမယ် ဆိုပြီး မှတ်တမ်းတွေ ယူထားတယ်။ တစ်ပတ်နေလဲ မဆက် နှစ်ပတ်နေလဲ မဆက်တော့ ပေါချောင်ကောင်း ၁၂ ကျပ်တန် သွားဝယ်ကြည့်တယ်။ မကြိုက်ဘူး။ အဲဒါနဲ့ အိုင်တီရှိုးမှာ အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ ဆိုနီ နားကျပ်ဝယ်လိုက်တာ။ ဆိုနီဆိုတော့ သိတဲ့ အတိုင်းပဲ အသံကွာလတီက စိတ်ချရတယ်။
Apple Store က ရောင်းထားတဲ့ သူ approve လုပ်ထားတဲ့ Dr. Dre ဘာညာ မကြိုက်ဘူး။ ဈေးကလဲ ၂၀၀ ကျော် ၃၀၀ ကျော်တွေ ဖြစ်တာလဲ ပါမှာပေါ့လေ။
ဆိုနီကတော့ ကျွန်တော် လက်လှမ်းမီတဲ့ ၁၂၉ ကျပ်ဆိုတော့ ဝယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့။ ဖြစ်ချင်တော့ အိုင်တီရှိုးဆိုပြီး ဈေးချထားတာ ၇၉ ကျပ်တဲ့။ ဝယ်လိုက်တယ်။ သဘောကျနေတယ်။ သူက အက်ဖ်အမ် ရေဒီယိုပါ နားကျပ်မှာ တွဲပါလာတယ်။ ဖုန်းနဲ့ ဘလူးတုဒ် မချိတ်ပဲ သူ့အတိုင်းလဲ ရေဒီယို နားထောင်လို့ရတယ်။ မဆိုးဘူးပဲ။
အဲဒီဆိုနီနားကျပ် ဝယ်ပြီးမှ အပြန်မှာTampines က စတားဟပ်ကို ဝင်ပြီး Warranty Claim လုပ်ထားတာကို follow up လာလုပ်တာ ဆိုပြီး ဒေါင်းတင် မောင်းတင် ပြောတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ငနဲသားက ခေါ်ဖို့ မေ့နေတာ။ အဲဒါကို ဖိပြောလိုက်တာ။ ချက်ချင်းပဲ အသစ်လဲပေးလိုက်တယ်။
အော်ရီဂျင်နယ် အိုင်ဖုန်းနားကျပ် ပြန်ရလေသတည်းပေါ့။ ဆိုးပါ့။ ဆိုနီနားကျပ် ဝယ်ပြီးခါမှ အိုင်ဖုန်းနားကျပ် အသစ် ပြန်ရတယ်။
အမ်အာတီကဒ်တုန်းကလဲ ဒီလိုပဲ။ ကဒ်ပျောက်သွားလို့ ကဒ်ဝယ်ပြီးခါမှ မာရသွန်ပြိုင်ပွဲအတွက် စပွန်ဆာပေးတဲ့ Goodies တွေထဲမှာ အမ်အာတီ ကဒ်သစ် တစ်ကဒ် ဖရီးရတယ်။
အိုင်ဖုန်းကလဲ ဝယ်စကနဲ့ မတူတော့ဘူး။ တိုစိ တိုစိတွေ ဝယ်လာလိုက်တာ accessories တွေက ဖုန်းဈေးနီးပါး တက်လာတယ်။
မှတ်မှတ်ရရ iPhone Skin အတွက် simlim square မှာ လက်ယားပြီး epicenter ကနေ silicon case ကို ၆၉ ကျပ် ပေးဝယ်တယ်။
နောက် သိတဲ့အတိုင်း ဘက်ထရီက အကုန်မြန်တဲ့ အိုင်ဖုန်းအတွက် ရုံးမှာ အားသွင်းဖို့ ချာဂျင်ကြိုးဝယ်တာ အစက third party က ထုတ်တဲ့ Charging Cable ကို ၂၅ ကျပ်နဲ့ ဝယ်တယ်။ စစချင်းတော့ ချာဂျင် ဝင်တယ်။ နောက်ပိုင်းကျတော့ အိုင်ဖုန်းနဲ့ မတည့်တော့ဘူး။ ဒါနဲ့ အော်ရီဂျင်နယ် ဝယ်လိုက်တာ ၅၉ကျပ် ပေးရတယ်။
အိမ်မှာကတော့ Apple Universal Docking ဝယ်လိုက်တာ 84 ကျပ်ကျတယ်။
ဒါတောင် အိုင်တီရှိုးမှာ ၁၂ ကျပ်နဲ့ တွေ့လို့ ဝယ်လာတဲ့ ချာဂျင်ကြိုး ရှိသေးတယ်။
မလေးရှားရောက်တုန်းက screen protector ကွာနေလို့ အသစ် ဝယ်လိုက်တာ ၄၀ ရင်းဂစ်တန် တပ်လိုက်တာ ရှိသေးတယ်။ အခုတော့ Skin Case ဝယ်တော့ ပါလာတဲ့ Crystal Clear Protector နဲ့ ပြန်ကပ်လိုက်တယ်။
အိုင်ဖုန်းများ .... လိုက်မိရင် ကုန်ပေါက်။ ဒါတောင် iPad မပါသေးဘူး။ ဟိုအိုင်ဖုန်းထဲက ဗွီဒီယိုတွေ ဓါတ်ပုံတွေကို တီဗွီမှာ ကြည့်ချင်ရင် သွယ်လို့ရတဲ့ Component Cable ဆိုတာ မဝယ်ရသေးဘူး။ ၇၉ကျပ်တဲ့။ သိပ်မလိုသေးဘူးလားလို့ မဝယ်သေးတာ။ မျက်စောင်းကတော့ ထိုးနေတုန်း။
App Store ထဲကတော့ app တွေ တစ်ခုပဲ ဝယ်ဖြစ်သေးတယ်။ တစ်ယောက်သော သူမက Bejeweled ဆော့ချင်တယ်ဆိုလို့ ၁.၉၉ လား ၂.၉၉ လား မသိဘူး စတိုးကနေ ဝယ်ထားတာ ရှိတယ်။
ကျန်တာ ဖရီးနဲ့သူများ ခရက်လုပ်ပေးထာတာတွေပဲ သုံးနေတယ်။
စလုံးက အိုင်ဖုန်းဒေတာ ပလန်တွေဟာ တစ်ခြားနိုင်ငံကထဲ စာရင် အတော်ကို ဈေးသက်သာတယ်။ အဲဒါကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချတတ်ရင် ဖုန်းဖိုးတွေ မနည်းဘူး သက်သာမယ်။ အခုကျွန်တော် pfingo ဆိုတဲ့ ကောင်လေး သုံးနေတယ်။ သူက ဝိုင်ဖိုင်ရော၊ 3G ရော အကုန်ချိတ်လို့ရတယ်။ pfingo ယူဆာ အချင်းချင်း ဖုန်းဆက်ခေါ်ရင် ဖရီးပဲ။ အဲဒါ သူငယ်ချင်းတွေကို pfingo အကောင့် ဆောက်ခိုင်းပြီး အဲဒါနဲ့ ခေါ်တာ ပွားတာ အတော်ကို ဈေးသက်သာတယ်။ နိုင်ဂျံဂါးက သူငယ်ချင်းလဲ သူ့အကောင့်ကို ခေါ်လိုက်ရင် ဖရီးပဲ။ မိုက်တယ်။
နောက်မှ သုံးလို့ကောင်းတဲ့ apps တွေ လာရေးပြမယ်။
အိုင်ဖုန်းထဲက angry bird လေး ဆော့လိုက်ဦးမယ်။ :P
ရေးသားသူ Ko Boyz at 5:04 PM6ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Daw Aung San Suu Kyi's Speech (14 Nov 2010, Sunday)
အမေစုရဲ့ ဟောပြောပွဲ - 14Nov2010 by mdy.3vil
အန်တီစုရဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ အသံဖိုင်ပါ။ ၄၄ မိနစ်စာ ရှိပါတယ်။
Credit to mdy.3vil the original uploader.
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:28 PM 1 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: ASSK, Aung San Su Kyi, Burma, Myanmar, policits, speech
ီDaw Aung San Suu Kyi released
Photo Credit : BBC Live News
မြန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွှတ်မြောက်ခြင်း။
Twitter မှာ အန်တီစု အကြောင်းက ထိပ်ဆုံးမှာ ရောက်နေတယ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 7:59 PM6ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: ASSK, Aung San Su Kyi, Burma, Free call to Myanmar, NLD
Are you Gay or Not..
အသင် ဂေးဟုတ်မဟုတ် စမ်းသပ်ရန်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 12:59 AM2ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ညနေ နေဝင်ချိန် ခြေခင်းသာချိန်လောက်ဆို ဒီလို သဘောင်္ ဥသြဆွဲသံကြားရင် ကိုဘမောင်တို့ ရွာသားတွေ ပျော်ကြတယ်။
ပျော်ကြမှာပေါ့။ အစိုးရ ဘိလပ်မြေတွေ တင်လာတဲ့ သဘောင်္က သူတို့ရွာနားက သိုလှောင်ရုံမှာ ဘိလပ်မြေအိတ်တွေ လာချတော့မှာလေ။
ဘိလပ်မြေအိတ်နဲ့ ရွာသားတွေနဲ့ ဘာဆိုင်လဲ ဆိုတာတော့ မမေးပါနဲ့...။
သဘောင်္ဝမ်းဗိုက်ထဲက ဘိလပ်မြေတွေကို ကုန်းပေါ်ထမ်းသယ်ဖို့ လူလိုတော့မယ်။
ကူလီလုပ်ချင်တဲ့ ရွာသားတွေလဲ အများသား...။
နောက် ကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်နေချိန်မှာ ရွာထွက် မုန့်လေး အစားအသောက်လေးလဲ ရောင်းလို့ရတယ်။
သဘောင်္က လူတွေ ကို ရောင်းတာ မဟုတ်ဘူး။
သဘောင်္ဆိုက်ချိန်ကို လာစောင့်နေတဲ့ ရွာနီးချုပ်စပ်က လူတွေ စားဖို့ သောက်ဖို့...။
ဘာလို့ သဘောင်္လာချိန်ကို လာစောင့်ကြလဲ ဆိုတော့ အဖြေရှိတယ်။
သဘောင်္ဝမ်းဗိုက်ထဲက ဘိလပ်မြေအိတ်တွေဟာ တစ်ခါတစ်လေ အထားအသို မမှန်ရင် အိတ်တွေ ပေါက်ပြဲပြီး ပျက်စီး ထွက်ကျကုန်တယ်။ အဲဒါဆို အပျက်အစီးစာရင်းထဲ ထည့်လိုက်ရတယ်။
ဘိလပ်မြေအိတ်တွေကို ကမ်းပေါ်သယ်ပြီးသွာရင် ဝန်ထမ်းတွေက အမှုန်အမွှားတွေကို ပြန်လှဲကျင်းနေရတာကိုက အလုပ်တစ်လုပ်။
အဲဒီတော့ ကူလီ လာလုပ်တဲ့ ရွာသားတွေက သူတို့ မိသားစု မိန်းမ၊ ကလေးတွေ ခေါ်လာပြီး အခပေး သန့်ရှင်းရေး လုပ်ကြတယ်။ အဲဒီမှာ မိန်းမတွေက ဘိလပ်မြေမှုန့်တွေ မြင်တော့ သူတို့အိတ်လေးတွေနဲ့ မလှည်းပဲ သပ်သပ်ဖယ်ထားတဲ့ ဘိလပ်မြေမှုန့်တွေကို ပြန်တဲ့အခါ သယ်သယ်သွားကြတယ်။
ဝန်ထမ်းတွေကလဲ အမှိုက်တွေဆိုတော့ ဘာမှ မပြောကြဘူး။
အဲဒီဘိလပ်မြေမှုန့်တွေက မြေမှုန့်ဘာညာရောလို့ မသန့်ပေမယ့် ရွာထဲက ကုန်စုံဆိုင် သူဌေးက အတီးက လက်ခံ ဝယ်တယ်။
ပြီးတော့ အစစ်တွေထဲ သက်သာတဲ့ နှုန်းနဲ့ ပြန်ရောင်းတယ်။
နောက်ပိုင်း အဲလို လုပ်နိုင်တာလဲ သိတော့ ရွာသားတွေက ဝန်ထမ်းတွေကို အခမဲ့ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးမယ်။ ဝမ်းဗိုက်ပေါ် ကျန်နေခဲ့တဲ့ ဘိလပ်မြေအမှုန့်တွေသာ ပေးပါ လို့ တောင်းဆိုတော့ ဝန်ထမ်းတွေက တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်လို့ သဘောကျတာနဲ့ ခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ ခါတိုင်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်လို့ ပေးရတဲ့ အဖိုးအခကို အိတ်ထဲ ထည့်ရတယ်လေ။ နောက် သဘောင်္လဲ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပြီးသား ဆိုတော့ သူတို့အတွက် ရှဉ့်လဲ လျှောက်သာ ပျားလဲ စွဲသာ ဖြစ်သွားတာပေါ့။
အဲဒီတော့ နောက်ပိုင်းတွေမှာ ရွာသားတွေ မည်သူမဆို တံမြက်စည်း ကိုယ်စီနဲ့ တက်လာကြတယ်။ အဲဒီ သတင်းကို ကြားတော့ ရွာနီးချုပ်စပ်က လူတွေပါ လာသယ်ကြတော့တာပေါ့...။
ဒီလိုနဲ့ ဘိလပ်မြေသင်္ဘောလာတဲ့ အချိန်ဆို အဲဒီ ရွာကလေးရဲ့ သဘောင်္ဆိပ်မှာ ပွဲဈေးတန်းလိုကို စည်ကားလို့...။
ဒီလိုနဲ့ လာသယ်တဲ့လူ များလာတော့ လူတွေရတဲ့ ကိုတာ အချိုးတွေက နည်းလာတယ်။ အတီးကလဲ ဈေးပေါပေါနဲ့ ရလေတော့ များများရအောင် ဝန်ထမ်းကို ပေါင်းပြီး လာဘ်ထိုးတယ်။ ဘိလပ်မြေ အိတ်အကောင်းကို ထိုးခွဲပြီး အပျက်အစီး စာရင်း တင်ဖို့။ နောက်ပိုင်းကျတော့ အဲလို တစ်အိတ်စ နှစ်အိတ်စ ထိုးခွဲတာတွေ ဖြစ်လာတယ်။
သယ်တဲ့သူတွေကလဲ သယ်နေတာပဲ။ ကိုတာကလဲ နည်းသထက် နည်းလာတယ်။ ခါတိုင်းဆို အမှိုက်သရိုက်တွေနဲ့ ရောနေတာတွေဆို မြစ်ထဲ ပစ်လိုက်တာကနေ အခုဆို အမှိုက်တွေပါ အိမ်ကို ပြန်သယ်ပြီးမှ သတ်သတ် ထပ်ရွေးရတဲ့ အထိ ဖြစ်လာတယ်...။
ကိုဘမောင်ကတော့ လူရိုးလူအေး ဆိုတော့ သူများတွေလို ဝန်ထမ်းနဲ့ မပေါင်းတတ်...။
လူကလဲ လူဖလံလေးဆိုတော့ ကူလီမထမ်းနိုင်။
သူများတွေလို့ တွန်းထိုးပြီး လုမသယ်တတ်တော့ သိပ်မရရှာဘူးပေါ့။
သူပိုးပန်းနေတဲ့ ရွှေမိကို လက်ဆောင် ပစ္စည်းလေး ရွာဘုရားပွဲ အမှီ ဝယ်ပေးချင်တဲ့ အာသီသလေးကလဲ ရှိရှာတယ်။ ဒီတစ်ခေါက် သဘောင်္လာရင်တော့ ဘယ်သူ့မှ အားနာမနေတော့ပဲ တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် လုသယ်မယ် အားခံထားရှာတယ်။
သဘောင်္လာတဲ့ နေ့မှာ သူကိုယ်တိုင် စပါယ်ရှယ် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ပုဆိုးစုတ်လေးကို ယူပြီး သဘောင်္ကို ရွာသားတွေနဲ့ အတူ အပြေး လာခဲ့တယ်။
ဘိလပ်မြေတွေ အကုန်သယ်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ သဘောင်္ပေါ်ကို ကုန်းဘောင်တံတား သစ်သားပြားကနေ အပြေးတက်ကြတယ်။
ဝမ်းဗိုက်ထဲကို အကုန် ပြေးဆင်းကြတယ်။ တံမြက်စည်းတွေနဲ့ အပြိုင်ကျုံးကြတာပေါ့။ ဘိလပ်မြေမှုန့်တွေက လေထုထဲမှာ တစ်ထောင်းထောင်းကို ထနေလို့။ အဆုတ်ထဲ အမှုန့်တွေ ဝင်သွားတာကိုလဲ ဘယ်သူမှ ဂရုမစိုက်ကြတော့ဘူး။ မြန်မြန်ရလေ များများရလေ စောစော ပြန်ရလေ။ စောစောရောင်းရလေ ညနေစာ စောစောစားရလေပေါ့။
လူတိုင်း တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဂရုမစိုက်အားတော့ဘူး။ ဘိလပ်မြေမှုန့်တွေ ကပ်နေလို့ မျက်နှာတွေ ဖြူဖွေးကုန်ပြီး မျောက်ရုပ်ပေါက်နေတာကိုလဲ မရယ်အားကြဘူး။ ကိုဘမောင်တစ်ယောက်ကတော့ အရင်ခေါက်ကတည်းက ကြည့်ထားတော့ ဝန်ထမ်းတွေ ထိုးဖောက်ထားတဲ့ ဘိလပ်မြေမှုန့်ကျနေတဲ့ နေရာကို သိနေတယ်။ သူက အေးဆေးပဲ။ သူများတွေလို လုသယ်မနေတော့ပဲ ဘေးနားက ရှပ်ပြီး ဟန်ပြလှဲနေတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဝမ်းဗိုက်နားမှာ ဘိလပ်မြေမှုန့်တွေ အမှိုက်သရိုက်တွေ ကုန်စင်သလောက် ဖြစ်နေပြီ။ ပြန်တဲ့ လူလဲ ပြန်နေပြီ။ ကိုဘမောင်ကတော့ မခွာသေး။ ဝန်ထမ်းတွေကလဲ လူတွေကို မောင်းထုတ်နေပြီ။ နောက်တစ်မြို့ကို သွားစရာ ရှိတယ်လေ။
ဝန်ထမ်းတွေက အကုန်ကုန်သွားပြီ ထင်ပြီး သဘောင်္ကို ကမ်းကနေ ခွာဖို့ လုပ်တယ်။
ကိုဘမောင်ကတော့ သူမြင်ထားတဲ့ ချောင်နားက ဘိလပ်မြေမှုန့်တွေကို စကျုံးတော့တယ်။ သယ်ဖို့ မေ့သွားလို့လား.. ကျန်ခဲ့တာကို မသယ်နိုင်လို့လား မသိဘူး။ ဘိလပ်မြေမှုန့်တွေဟာ အိတ်တစ်ဝက်သာသာလေး ပိုနေတယ်။ ကိုဘမောင် တစ်ယောက် ဒီတစ်ခေါက် သူယူလာတဲ့ ပုစိုးစုတ်က ဆိုဒ်သေးနေလို့ သူ့ကိုယ်သူတောင် အပြစ်တင်နေသေးတယ်။
မျက်လုံးထဲမှာတော့ ရွာဘုရားပွဲမှာ သူဝယ်ပေးတဲ့ ပါတိတ်စလေးနဲ့ လှနေမယ့် သူ့ချစ်သူလေးကို မြင်ယောင်ရင်း ဘိလပ်မြေမှုန့်တွေ ကျုံးသယ်နေတယ်။
ဘဘောင်္ထွက်ဖို့ အသံပေးတဲ့ ဥသြသံကြားမှ ကိုဘမောင် ကမ်းပေါ် ပြန်တက်ဖို့ သတိရတော့တယ်။ ရသလောက်ကို သယ်လာတာ လူတောင် လှမ်းရတာ အနိုင်နိုင်။ သဘောင်္ ကုန်းပတ်ပေါ် ရောက်တော့ ဝန်ထမ်းတွေက ကိုဘမောင်ကို မြင်တော့တယ်။ ကမ်းကလဲ ခွာနေပြီ။ ကုန်းဘောင်တံတားကိုလဲ သိမ်းထားလိုက်ပြီ။ မမှီတော့ဘူး။ ကိုဘမောင်က ကမ်းကို ခုန်တက်ဖို့ လုပ်တယ်။ ကမ်းပေါ်က လူတွေက မြင်တော့ ဘိလပ်မြေအိတ်ကို လွှတ်ချပြီး ခုန်ခဲ့ဖို့ ပြောတယ်။ ကိုဘမောင်တစ်ယောက် ချီတုံချတုံ ဖြစ်နေတယ်။ နောက်တော့ မိုက်ရူးရဲစွာနဲ့ ဘိလပ်မြေ ထုတ်ထားတဲ့ ပုဆိုးအိတ်နဲ့အတူ ခုန်ချလိုက်တယ်။
ရေထဲ သူကျသွားတယ်။ အိတ်ကို သူမလွှတ်ထားဘူး။ သူက ရေလဲ သိပ်ကူးတတ်တာ မဟုတ်ဘူး။ ခွေးကူးတောင် အနိုင်နိုင်ရယ်။ အခုလို အလေးအလံ ပစ္စည်းပါ ပါနေတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။ လူက ကူးလေ နစ်လေ ဖြစ်လာတယ်။
နောက်တော့ ခေါင်းတောင် မဖော်နိုင်တော့ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ နောက်တော့ စုံးစုံးမြုပ်သွားလေရော....။
ကိုဘမောင် အလောင်းကို နောက်တစ်နေ့နေမှ ရွာအောက်ဖက်လောက်နားက မြစ်ကြမ်းပြင်မှာ တွေ့တော့တယ်။ သူသယ်လာတဲ့ ဘိလပ်မြေအိတ်လေးကို ရင်ခွင်မှာ မလွှတ်တမ်း ပိုက်ပြီး ခွေခွေလေး နစ်နေတာ။ မြင်သူတိုင်း စိတ်မခိုင်ကြဘူး။ မျက်ရည်လွယ်တဲ့ ရွာက မိန်းကလေး တစ်ချို့ ငိုနေကြတယ်။ ကိုဘမောင် ချစ်သူလေးကတော့ မျောသွားလို့ အိမ်ကို ပြန်ခေါ်သွားလိုက်ရတယ်။
ကိုဘမောင်ဟာသူ့ဘိလပ်မြေမှုန့်တွေကို ပလပ်စတစ်အိတ်ထဲ သေချာထည့်ထားပြီး ထုပ်ပိုးထားလေတော့ ရေတစ်စက်မှ မဝင်ဘူး။ အကောင်းအတိုင်း ရှိနေတုန်း။ သူ့လက်ထဲမှာ မလွှတ်တမ်း ဆုပ်ထားတာ လက်ကို မနည်း ဖြည်ရတယ်။ လေသင်တုန်း ရိုက်ခံထားရတဲ့ သူ့အမေ မုဆိုးမကတော့ သားအလောင်းကို မြင်ပြီး အင့်ခနဲ တစ်ချက်ရှိုက်ပြီး မေ့သွားလိုက်တာ မထနိုင်တော့ဘူး။ ကိုဘမောင် အလောင်း မြေကျတဲ့ အထိ အိပ်ရာပေါ်မှာ ကျန်နေခဲ့တယ်။
ကိုဘမောင် အလောင်းကို မြေမြုပ်ပြီး ဂူသွင်းလိုက်ကြတယ်။ သူသယ်လာတဲ့ ဘိလပ်မြေမှုန့်တွေနဲ့ အုတ်ဂူ ဆောက်ပေးလိုက်တာပေါ့။
နောက်တော့လဲ ရွာလေးလဲ သူ့ပုံမှန် အနေအထားအတိုင်း ပြန်ဖြစ်သွားလေရဲ့။
ကိုဘမောင် အုတ်ဂူလေးကတော့ ရွာထိပ်က ညောင်ပင်အောက်မှာ ရေညှိတွေ တက်လို့.....။
ငယ်ငယ်တုန်းက ဖတ်မိတဲ့ ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ပါ...။
အဲဒါဘယ်သူရေးတာလဲ မသိဘူး။ မိုးမိုးလား မစန္ဒာလား...။
ဝတ္ထုတိုအနေနဲ့ မဟေသီလား သပြေလား ပါလာတတ်တယ်လေ။
ကိုယ်အဲဒီဝတ္ထုငယ်ငယ်က ဖတ်မိပြီး သနားလိုက်တာ
ကိုယ်သနားတဲ့ ဇာတ်ကောင်က သူက အဲဒီလို တက်ကျုံးတဲ့ ရွာသားထဲက တစ်ယောက်...။
ဘယ်နေရာမှ ကိုယ်မခံစားဘူး။ မြစ်ကြမ်းပြင်မှာ ဘိလပ်မြေထုတ်ကို လက်က မလွှတ်တမ်း ရင်ခွင်ထဲပိုက်လို့ ခွေခွေလေး ဆိုတာပဲ ဖတ်မိပြီး မြင်ယောင် စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေတာ။
ဝတ္ထုနာမည်လေးနဲ့ စာရေးသူလေး သိချင်တယ်။
အခုက ကိုယ်ဖတ်ထားလို့ မှတ်မိသမျှလေးကို ပြန်ဆန်းသစ်လိုက်တာ။
ဝတ္ထုထဲမှာ ဘိလပ်မြေကို ဘယ်လို ထုပ်ထားတယ် ဆိုတာ မပါဘူး။ ပါလား မပါလား ဆိုတာ ကိုယ်မသေချာပါ။ ကိုယ်လဲ သတိမထားမိဘူး။ ကြီးလာမှ စဉ်းစားမိတာက တစ်ကယ်လို့ ပုဆိုးနဲ့ ထုပ်ထားရင် ရေစိမ့်ဝင်ပြီး ဘိလပ်မြေတွေ ခဲကုန်မှာပေါ့လို့။ (အခုတော့ နည်းနည်း ယုတ္တိတန်အောင် ပလပ်စတစ်နဲ့ ထုပ်ထားပေးလိုက်တယ်။ )
အရင်တုန်းက ဘိလပ်မြေ ဆိုတာ မရှိပဲ မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်နဲ့ လုပ်တာတွေကို မြေစေးလား သရွတ်လား ခေါ်တာ ရှိပါတယ်။ အခုခေါ်နေတဲ့ ဘိလပ်မြေက အင်္ဂလိပ်တွေဆီကနေ တင်သွင်းလာတာ ဖြစ်လေတော့ ဘိလပ်က လာတဲ့ မြေ.. ဘိလပ်မြေလို့ ခေါ်ကြတာလို့ မှတ်ဖူးတယ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:04 PM 10 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: Emotions, Miscellaneous, novel
"New ButterFly Dream " : Justic Pao's Movies Theme Song (ပြည်သူ့တရားရှင် ပေါင်ချိန် ဇာတ်ဝင်သီချင်း)
တစ်ခေတ်တစ်ခါက မြဝတီ ရုပ်မြင်သံကြားမှာ နှစ်နှစ်ကျော် သုံးနှစ်နီးပါး ထုတ်လွှင့်ပြသသွားတဲ့ ပြည်သူ့တရားရှင် ပေါင်ချိန် ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက ဇာတ်ဝင်သီချင်းပါ။
ဒီသီချင်းသံကြားရင် အိပ်ချိန်တန်ပြီဆိုတာ အလိုလို သိတယ်။ အဲဒီတုန်းက အဖေက ဆေးရုံတက်နေတုန်း။
ဆေးရုံမှာ အဖေ့ကို စောင့်အိပ်ရင်းနဲ့ စစ်စတာတွေ အခန်းထဲ တီဗွီ သွားကြည့်ကြတယ်။ နာတာရှည် လူနာတွေနဲ့ အတူတူ ကြည့်ကြတာပေါ့။ ပေါင်ချိန် လာချိန်ဆို ဆရာမတွေလဲ ဝတ်ကျေတန်းကျေပဲ ရောင်းလှည့်တော့တယ်။ ဘယ်လှည့်မှာလဲ။ လူနာခန်းထဲက လူနာတွေ အကုန်လုံး လူနာရော လူနာရှင်ရော တီဗွီခန်း ရောက်နေတာကိုး။
ဒီသီချင်းနဲ့ ဇာတ်လမ်းပိတ်ချိန်ဆို အပြီးထိ ကြည့်ကြတာ များတယ်။ သီချင်းကလဲ ကောင်းတာကိုးဗျ...။
ဒီသီချင်းလေးကို အင်တာနက်ပေါ်မှာ တွေ့မိလို့ ထပ်လိုက်ရှာလိုက်တာ စာသားတွေပါ ရလာတယ်။ သီဆိုသူကတော့ Huang An လို့ သိရပါတယ်။ သီချင်းနာမည်ကတော့ အင်္ဂလိပ်လိုဆို New Butterfly Dream လို့ မှည့်ထားတယ်။ တရုတ်လိုကတော့ Xin Yuan Yang Hu Die meng လို့ ခေါ်ပါသတဲ့။
ဖိုးဆိုချင် မယ်ဆိုချင်များ လိုက်ဆိုလို့ရနိုင်အောင် အသံထွက်တွေကို အနီးစပ်ဆုံး ပေါ်ဖော်မော်ဖော် နဲ့ ရေးထားတယ်။
Huang An - Xin Yuan Yang Hu Die Meng
新鸳鸯蝴蝶梦 - 黄安
You Shui Ting Dao Jiu Ren Ku
Kan Shi Ge Yuan Yang Hu Die
Bu Ying Gai De Nian Dai
Ke Shi Shui You Neng Bai Tuo Ren Shi Jian De Bei Ai
He Ku Yao Shang Qing Tian
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:42 PM 8 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: chinese, justic pao, movies, song, theme song
Free Surgery by Team of German Doctors in Myanmar
ဂျာမဏီက ဆရာဝန်တွေ ကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးကုပေးမယ့် အစီအစဉ်လို့ သိရပါတယ်။
နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ နှာခေါင်းမှာ ဘုကြီးကြီးတွေ ထွက်တာ ဘာညာ ရောဂါတွေကို ခွဲစိတ်ပေးမယ့် အလှူလို့ သိရပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ လမှာ မြန်မာပြည်ကို လာပါမယ်တဲ့။
ရခိုင်ပြည်နယ် ငပလီနဲ့ သံတွဲအရပ်တွေမှာ အခမဲ့ ခွဲစိတ်ပေးမယ်လို့ သိရပါတယ်။
သွားစရိတ် နေစရိတ်ကတော့ ကိုယ်တိုင် ကျခံရမယ့် သဘော ထင်ပါတယ်။
အသေးစိတ် သိလိုသူများ အောက်က စာကို ဖတ်ပါ။
Credit to : Ngu War Hlaing, MgLuAye Blog
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:07 AM0ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Apple Peel ဆိုပဲ။ အိုင်ပေါ့တ်တပ်ခ်ျကို အဲဒီ Apple Peel တပ်လိုက်တာနဲ့ အိုင်ဖုန်းဖိုး လို သုံးလို့ရမယ်တဲ့...။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက်တုန်း နည်းပညာ သတင်းမှာ တရုတ်ပြည်က ကောင်လေးတစ်ယောက် လုပ်နေတယ်သာ ကြားနေတာ။ အခုလောက် အောင်မြင်လာမယ် မထင်ဘူး။ ခုတော့ ယူအက်စ်ကို သွင်းတော့မယ်တဲ့။
သူက အိုင်ဖုန်းထည့်တဲ့ ကေ့စ်လို ထုတ်ထားတာ။ ဆင်းမ်ကဒ် ထည့်ဖုို့ နေရာရယ်၊ ဘက်ထရီရယ် ပါတယ်။ တစ်ခုကို ယူအက်စ် ခြောက်ဆယ်လောက် ကျမယ် ပြောတယ်။ အဲဒါတပ်လိုက်ရင် ဖုန်းပြော မက်ဆေ့ခ်ျပို့လို့ရပြီတဲ့...။
တစ်ကယ် အလုပ်ဖြစ်ရင်တော့ ၆၄ ဂစ် အိုင်ပေါ့တ်တပ်ခ်ျလေး ၀ယ်ပြီး သုံးလိုက်မယ်။ အခု နောက်ဆုံးပေါ် အိုင်ပေါ့တ်တပ်ခ်ျလေးက Rectina Display, Front Facing Camera, FaceTime ပါတယ်ဆိုတော့ စမ်းချင်နေတာ...။
အကျယ် ဖတ်ချင်ရင်တော့ အောက်ကလင်ခ့်ကို သွားလိုက်ပါ။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 9:41 PM0ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Germany မှာ ရှိတဲ့ ရထားပုံတူသေးသေးလေးတွေ စုထားတဲ့ နေရာပါ။ ကမ္ဘာ့မြို့ကြီးတွေကိုလဲ ပုံတူ ဆောက်ထားပြီး ရထားလေးတွေက အဲဒီမြို့တွေကို ပတ်ပြေးနေတာပါ။ ကလေးလေးရှိရင် ခေါ်သွားလို့ ကောင်းတဲ့ နေရာလေးပဲ။ သွားချင်လိုက်တာ။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 9:52 PM5ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 9:47 PM5ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Looking for whole unit / flat
Location : Bedok (Preferred North)
Room Type : 3NG(2+1) or 4NG(3+1)
Budget : 1,600 , 2,100 respectively
Avail : 1st Oct
Pls, contact me if someone have helpful info:
အခန်းရှာနေတုန်းမို့ အသိလေးဘာလေးရှိရင် ပြောပြပါဦး။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:53 PM2ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Credit to : courtwright.org
ရေးသားသူ Ko Boyz at 12:39 AM2ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ဂူဂယ်ကို လူတိုင်း သိမှာပါ။
ဂူဂယ်နဲ့ ကိုယ်သိလိုတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ရှာဖွေတာ ဘယ်လောက် မြန်ဆန်တယ်ဆိုတာလဲ သိကြမှာပါ။
အခု ဂူဂယ်ကနေပြီး လုပ်ဆောင်ချက် အသစ်တွေ ပါတဲ့ Google Instant ဆိုတဲ့ new feature ကို Google Search မှာ ထည့်သွင်းပေးလိုက်ပါပြီ။
ဘယ်လို ကောင်းလာလဲ ဆိုတော့ အချို့ဥပမာတွေ ပြရရင် အရင်ကထက် ရှာဖွေနှုန်း ၄-၅ စက္ကန့် ပိုမြန်လာပါမယ်။
စာတစ်လုံး ရိုက်လိုက်ရင် အဲဒီစာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ချက်ချင်းပဲ မြင်နေရပါမယ်။ စက္ကန့်မလပ် update လုပ်ပေးမယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
လောလောဆယ် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ နိုင်ငံတွေကတော့ US, UK, France, Germany, Italy, Spain and Russia တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Browser တွေကတော့ Chrome v5/6, Firefox v3, Safari v5 for Mac and Internet Explorer v8 ဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုင်းကသာ Google Instant ကို အသုံးပြုပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အချက်တွေကို ရှာမယ်ဆိုရင် အရင်ကထက် 3.5 billion Second အချိန်ကုန် သက်သာသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အကျယ်ဖတ်ချင်ရင် ဒီလင့်ခ်မှာ သွားဖတ်လိုက်ပါလေ။
ကော်နက်ရှင်နှေးတဲ့ နေရာတွေမှာတော့ ၅ စက္ကန့်လောက် ပိုမြန်လာတာလောက်နဲ့တော့ ပြောပလောက်အောင် ထူးခြားမှာ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ (တားတို့ ရွှေပြည်ကြီးကို ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ :D )
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:35 AM 1 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ဘယ်နေရာမှာမှ လင့်ခ်မထားချင်လောက်တဲ့ ဘလော့ဂ်ကို ရေးတတ်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ အလုပ်ကို အချိန်ဆွဲနိုင်သလောက် ဆွဲတတ်တယ်။ တစ်ခါတစ်လေလဲ အဲဒါနဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် လုပ်နေတတ်ပြန်ရော။ အစိုးရိမ်ကြီးတတ်သူ ဖြစ်တတ်သလို တစ်ခါတစ်လေလဲ လာမယ့်ဘေး ပြေးတွေ့ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကို ကျင့်သုံးတတ်ပြန်ရော။ မာယာမပါ စကားပြောတတ်သလို မုသားမပါ လင်္ကာမချော ဆိုတဲ့ အတိုင်းလဲ လုပ်တတ်ပြန်တယ်။ စိတ်ကူးထဲမှာ သံတိုင်အိမ်ဆောက်တတ်ပေမယ့် လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်ဖို့မှာတော့ ပျင်းရိနေတတ်တယ်။ တစ်ခုခုကို ကြိုမြင်တတ်တဲ့ တတိယမျက်လုံး ပိုင်ဆိုင်တယ် ထင်ရလောက်အောင် တင်ကြို သိမြင်တတ်ပေမယ့် လူမိုက်နောက်မှ အကြံရ စကားပုံဟာ သူ့အတွက် ထားခဲ့လေသလား ထင်မှတ်မှားလောက်အောင် လုပ်ပြတတ်တယ်။ တစ်ခုခုကို စိတ်ပါရင် အသည်းအသန် စူးနစ်စွာ လေ့လာမျောဝင်နေတတ်ပြီး ဟင်ဆိုရင်လဲ ဘယ်တော့မှကို ပြန်လှည့်မကြည့်ချင်တော့တဲ့ သူတစ်ယောက် ဖြစ်နေပြန်တယ်။ အကြောင်းအရာစုံကို သိနေတတ်ပေမယ့် တစ်ကယ်တမ်း စစ်စစ်ပေါက်ပေါက် မေးလာရင်တော့ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို ဖြစ်နေတတ်တယ်။ အရာရာကို ခွင့်လွှတ်တတ်ပေမယ့် တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အငြိုးကြီးတတ်သူ ဖြစ်နေပြန်တယ်။ ဗေဒင်မယုံဘူး လို့ ကြွေးကြော်တတ်ပေမယ့် မဂ္ဂဇင်းထဲပါလာတဲ့ ခုနှစ်ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်းကို ဖတ်တတ်သူ ဖြစ်နေပြန်တယ်။ အသန့်ကြိုက်တတ်သူ ဖြစ်ပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေလဲ ပစ်စလက်ခတ် နေတတ်ပြန်ရော။ အိမ်လွမ်းသူ ဖြစ်ပေမယ့် အလည်ပြန်ဖို့က လွဲပြီး အိမ်ပြန်ဖို့ တစ်ခါမှ မစဉ်းစားခဲ့ဘူး။ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တတ်ပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ အများအတွက် စဉ်းစားတတ်တဲ့ ဉာဉ်ကလေးက ရှိနေတတ်ပြန်တယ်။ တစ်ပါးသူကို အားပေးစကား ပြောတတ်တဲ့နေရာမှာ အရာရောက်သလောက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် panic ဖြစ်လာရင် ဘေးလူက ဘယ်လိုပြောပြော မရတတ်တဲ့သူ ဖြစ်ပြန်သတဲ့။ တစ်ယောက်ယောက်ကို ချုပ်ကိုင်ခြယ်လှယ်ချင်ပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ လွပ်လပ်ခွင့်ကို မြတ်နိုးတတ်သူ ဖြစ်နေပြန်ရော။
စိတ်ကူးပေါက်၍ ရေးမိသည်။ ချစ်ကြည်သော မျက်စေ့နှင့် ရှုပါကုန်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 9:13 PM9ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
iPhone ထဲက apps တွေကို ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေထဲက သွင်းထားပါတယ်။
အဲဒီအထဲက အသုံးဝင်တာလေး တွေ့လို့ ဘလော့ဖတ်ဖော်ဖတ်ဖက်တွေကို ဝေမျှချင်တဲ့ apps လေး တစ်ခုပါ။
သူက ဖုန်း built-in memory ကို တိုးပေးတယ်။ နောက်ပြီး တစ်ခြားသော Free Memory Apps နဲ့ မတူတာကတော့ ဖုန်းရဲ့ RAM ကိုပါ Fix လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်းလေးပါ။
Wired ဆိုတာက ဖျက်လို့ မရတဲ့ built-in OS function တွေအတွက် သုံးထားတဲ့ Memory ဖြစ်ပါတယ်။
Active ဆိုတာကတော့ လက်ရှိ ဖွင့်ထားတဲ့ apps တွေက သုံးစွဲထားတဲ့ Memory တွေပါ။
Inactive ဆိုတာကတော့ ဖွင့်ထားခဲ့တဲ့ apps တွေသုံးစွဲထားတဲ့ memory တွေ ကျန်နေတဲ့ ပမာဏပါ။
Free ကတော့ သိတဲ့ အတိုင်း အလွတ်ကျန်နေတဲ့ memory တွေပေါ့။
အသုံးပြုပုံကတော့ ညာဘက်အောက်ထောင့်က စက်ဝိုင်းပုံ မြှားအစိမ်းလေး ကို နှိပ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ apps က အလိုအလျောက် Refresh လုပ်ပြီး inactive ထဲက memory တွေကို Free ထဲကို ပြောင်းထည့်ပေးခြင်းအားဖြင့် Free Memory ပမာဏတွေ တိုးလာပြီး ဖုန်းလုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ ဖလန်း ဖလန်းကို ထလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
iPhone 3G, 3GS, iPhone4တွေအတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်ထားပါတယ်။ iPod Touch တွေလဲ အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
apps ကို download လုပ် သုံးစွဲချင်ရင်တော့ ပရိုမိုးရှင်းအနေနဲ့ free ပေးထားတဲ့ ဒီကာလ (စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့ မတိုင်ခင်) အတွင်း Apps Store ရော ဒီကနေရော download လုပ်ယူနိုင်ပါကြောင်း မောင်းထု ကြေငြာ ပေးလိုက်ရပါတယ်။
ဒီapps ကို သုံးပြီး memory ကို free လုပ်ပေးလိုက်တာ စွမ်းဆောင်ရည် ၃၀% မက တက်လာတာ တွေ့လို့ iPhone သုံးစွဲသူ မိတ်ဆွေများကို သုံးစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ အသိပေးလိုက်ပါတယ်။
(စာကြွင်း။ ။ ဤစာရေးသူ တင်ပြသော apps ကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးအပြစ်များ အားလုံးသည် စာရေးသူနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ :D )
ရေးသားသူ Ko Boyz at 9:57 AM2ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ပတ်မကြီး ထိုးခွဲတတ်တဲ့ မင်းသားရူးတွေ အကြောင်း...
ကိုယ့်ကြိုးနဲ့ ကိုယ်ပြန်ရှုပ်သွားတဲ့ ကကြိုးရုပ် အကြောင်း...
ကိုယ်ဖော်တဲ့ ဆေးကို ကိုယ်ပြန်စားလို့ မရတော့တဲ့ ဆေးဆရာ...
စပျစ်သီးချဉ်တယ်လို့ ငြီးတွားနေတဲ့ မြေခွေး...
ရေးသားသူ Ko Boyz at 8:16 PM6ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
အံမယ်... ခုနလေးတင် ဒီညနေပိုင်းကမှ ဂျီမေလ်း ဖွင့်လိုက်တာ... ဗြုန်းဆို တက်လာပါရောလား...။
သြော်.. ဂျီမေးလ်ကနေ လိုင်းဖုန်းတွေကို ဖုန်းခေါ်လို့ရပြီ ဆိုတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျလေးပါ။
လောလောဆယ်တော့ အမေရိကားနဲ့ ကနေဒါနိုင်ငံကို ၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ အခမဲ့ ခေါ်လို့ရပါတယ်တဲ့...။ နှစ်ကုန်သွားရင်တော့ အခကြေးငွေ တွေ ဘာတွေနဲ့ လာတော့မှာပေါ့လေ။
တစ်ခြားနိုင်ငံတွေကတော့ အခကြေးငွေနဲ့ စတင် ကောက်ခံမှာပါ..။
စစချင်း ပရိုမိုးရှင်းအနေနဲ့သုံးတဲ့ စာသားလေးက သင်းတယ်ဗျား...။ နိုင်ငံတကာကို ခေါ်ဆိုခသည် Insanely Rate တဲ့....။
ပထမဦးဆုံး မိမိ ဂျီမေးလ်ကို ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အထက်က ပုံအတိုင်း ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ အဲဒါကို ကလစ်လုပ်လိုက်ရင် ဂူဂယ် ရ့ Terms & Conditions ဘာညာ သာရကာတွေကို သဘောတူမတူ မေးတဲ့ Pop Up Box တစ်ခု ပေါ်လာမယ်။ အဲဒီမှာ Try now ကို ကလစ်နိုပ်လိုက်ရင် အောက်က ပုံအတိုင်း မိမိ ဂျီမေးလ်ဖွင့်ထားတဲ့ ဘရောက်ဇာရဲ့ ညာဘက်အောက်ခြေမှာ ဖုန်းနံပါတ်နှိပ်ဖို့ အကွက် ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါလေးကို နှိပ်ပြီး မိမိ အလိုရှိရာ နိုင်ငံဒေသအသီးသီးကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါပြီ။
မြန်မာပြည်ကို ဖုန်းခေါ်ချင်ရင် တစ်မိနစ်ကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ $0.35 / minutes နှုန်း ကျသင့်ပါလိမ့်မယ်။ skype နဲ့ သိပ်မကွာသလိုပဲ...။ ဂူဂယ်က မဆိုစလောက်လေး သက်သာပါတယ်။
တစ်ခုကောင်းတာကတော့ စကိုက်ပ် လို ဆော့ဖ်ဝဲသတ်သတ် သွင်းစရာ မလိုပဲ မိမိရဲ့ ဂျီမေးလ်ကနေ တစ်ဆင့် ခေါ်ဆိုမှု ပြုလိုက်နိုင်ခြင်းပါပဲ...။
(ဂူဂယ်က Gizmo5 ကို ဝယ်လိုက်ကတည်းက VoIP နည်းပညာကို သူတို့ လမ်းထပ်ချဲ့လိုက်တယ် ဆိုတာ အဲ့ကတည်းက တွေးမိတာ မှန်မှန်း ခုတော့ သိတယ်...။)
အကျယ်သိချင်ရင် Google Mail ရဲ့ Official Website ကို သွားကြည့်ပါလား...။
ထပ်ဖြည့်။ ။ ပိုက်ဆံထည့်ဖို့နေရာ ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်အကောင့်ထဲက ကျန်နေတဲ့ ပမာဏကို ဖော်ပြတဲ့ နေရာနားက Down arrow key ကို နှိပ်လိုက်ရင် နောက်ဘရောက်ဇာတစ်ခုမှာ ခရဒ်ဒစ်ကဒ် အင်ဖော်မေးရှင်းတွေ ဖြည့်ဖို့ ပုံစံထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ Billing Tab အောက်နားမှာ Add $10 ဆိုတဲ့ ခလုတ်လေးကို နှိပ်ပြီး လိုအပ်တဲ့ ခရဒ်ဒစ် အချက်အလက်တွေကို ဖြည့်လိုက်ရုံနဲ့ ကိုယ့်အကောင့်ကို ကိုယ် top up လုပ်နိုင်ပါပြီ။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 7:15 PM5ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: gmail, Google, Phone, VoIP
မီးမီး။ ။ ဟဲလို ကိုကိုလား... မီးမီးဗိုက်ဆာတယ်။
ကိုကို။ ။ အင်း... ချက်ထားတာ ရှိတယ်။ လက်ဖက်နဲ့ နယ်စားမယ်လေ။ ဒါပဲနော်။ (ဂွပ်)
ကိုကို ။ ။ (အင်း... မီးမီးအတွက် ထမင်းကျန်သေးတယ်။ မချက်တော့ဘူး။)
ကိုအောင်။ ။ ဟေး .. ပြန်ရောက်တာ စောလှချည်လား။ အလုပ်မသွားဘူးလား...။
ကိုကို။ ။ ဒီနေ့ စောပြန်လာလိုက်တယ်။
ကိုကို။ ။ (ဟိုက် ကိုအောင် ထမင်းတွေ အကုန်စားလိုက်ပြီ။ မီးမီးအတွက် မကျန်တော့ဘူး။ ထပ်ချက်လိုက်ဦးမှ...)
ဗျို့ ကိုအောင် ထမင်းကုန်သွားတာ ပြန်ချက်မပေးဘူးဗျာ။ ဒီမှာ ဘာမှ မစားရသေးဘူးဗျ။
ကိုအောင်။ ။ ဟေ.. မသိဘူးလေကွာ။ အစောကြီး ရောက်နေတော့ စားပြီးပြီ ထင်နေတာ။
မီးမီး။ ။ ကိုကို တံခါးဖွင့်ပေး...
ကိုကို။ ။ (ဟိုက် မီးမီး ရောက်လာပြီ။ ထမင်းက ခုမှ ကျက်လို့ တော်သေးတယ်။ လက်ဖက်လေးနဲ့ နယ်ပေးမှ ပူပူလေး စားလို့ ကောင်းမယ်။ ခမျာ ကားစီးလာတာ ပင်ပန်းရှာတယ်။ ဆာနေရော့မယ်။ မြန်မြန်လေး လုပ်မှ...။)
လာ လာ..ဒီမှာ ထမင်းကို လက်ဖက်နဲ့ နယ်ပေးနေတာ။
မီးမီး။ ။ ဟင် မီးက ပူရင် မစားတတ်ဘူး...။ (စိတ်ကောက်သွား....ခြေဆောင့်ထွက်သွား)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:23 PM9ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
အခုတစ်လော စောင့်ကြည့်သူတွေ ကြားထဲမှာ ပွက်လောညံအောင် ပွဲဆူစေတာကတော့ Apple ရဲ့ လတ်တလောက မူပိုင်ခွင့်တင်လိုက်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါ။ ဘယ်လိုမူပိုင်လဲ ဆိုတော့ ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခု ထွင်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ ဆော့ဖ်ဝဲဟာ iPhone, iPad အသုံးပြုသူများကို ထောက်လှမ်းနိုင်သလို Remotely disable လုပ်နိုင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စောင့်ကြည့်သူများ စောဒက တက်တာကတော့ Apple ဟာ ဒီဆော့ဖ်ဝဲကို ဗန်းပြပြီး သုံးစွဲသူများ ဗရိုက်ဗေစီကို ချိုးဖောက်လာနိုင်သလို JailBreak လုပ်ထားတဲ့ ဖုန်းများကိုလဲ ထောက်လှမ်း လာနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တစ်ချို့သော အကောင်းမြင်ဝါဒီများကတော့ ဒီလိုဆော့ဖ်ဝဲမျိုးဟာ အခိုးခံလိုက်ရတဲ့ ဖုန်းအတွက် ဒေတာ လုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာ အလွန် အထောက်အကူပြုပါတယ်တဲ့။ အခိုးခံရ ပြီလို့ သတင်းပို့လိုက်တာနဲ့ Apple က ဒီဖုန်းကို လှမ်းပြီး ပိတ်လိုက်လို့ရအောင် ဒီဆော့ဖ်ဝဲက လုပ်ပေးပါတယ်တဲ့....။
ဟုတ်ပြီ...။ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ ဒီဆော့ဖ်ဝဲကို ကြိုက်သည် ဖြစ်စေ မကြိုက်သည် ဖြစ်စေ။ Apple ကတော့ အိုင်ဖုန်း အိုင်ပက် သုံးသူတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှု မှန်သမျှကို အရင်ဦးဆုံး သိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကတော့ ငြင်းလို့ မရတဲ့ အချက်ပဲ။
မိတ်ဆွေ ဖုန်းကို ဘယ်လို အသုံးချသလဲ။ Jail Break လုပ်လိုက်သလား။ တစ်ခြားသော ဖုန်း အော်ပရေတာမှာ ဖုန်းကို သုံးလိုက်သလား။ (ဒီအချက်ကတော့ အမေရိကားမှာ အိုင်ဖုန်းကို AT&T ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီ ကွန်ယက်နဲ့ သာ သုံးနေရတဲ့ သူတွေအတွက် အကျုံးဝင်ပါတယ်။) ဒီအချက်တွေကို Apple အနေနဲ့ ထောက်လှမ်းခြင်း ပြုမပြုဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
ဒီနေရာမှာ ဆော့ဖ်ဝဲက ဘယ်လို လုပ်ဆောင်တယ် ဆိုတာ အကြမ်းဖျင်း ရှင်းပြချင်တယ်။
- ပထမမှာ ဖုန်းက သုံးစွဲသူရဲ့ နှလုံးခုန်သံ (HeartBeat ကို ဘာသာပြန်တာပါ။) နဲ့ မျက်နှာအမူအရာ (Face detection) ကို မှတ်သားထားလိုက်မယ်။
- ဖုန်းသုံးစွဲသူက ဖုန်းကို ပါဝါဖွင့်လိုက်တိုင်းမှာ အဲဒီ ဆော့ဖ်ဝဲက သူမှတ်သားထားတာနဲ့ ဖုန်းကို ဖွင့်လိုက်သူဟာ ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိကို အရင် စစ်ဆေးမယ်။
- မကိုက်ဘူးဆို ဖုန်းကို ဖွင့်ခွင့်ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး။
အင်း... အပေါ်ယံကြည့်သလောက်ကတော့ မဆိုးဘူးလို့ ထင်ရပါတယ်။
လတ်တလောမှာ အမေရိကားမှာ ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ အသစ်အရ အိလက်ထရောနစ် ထုတ်ကုန်တစ်မျိုးမျိုးကို မိမိ ပါစင်နယ် အသုံးချဖို့အတွက် hacking, jailbreak လုပ်တာဟာ ဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်းမှု မရှိ ဆိုတဲ့ အချက်ဟာ Apple အရှိုက်ကို တည့်တည့်ထိသွားပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူလဲ သူတတ်နိုင်တဲ့ ဘောင်အတွင်းကနေ ဒီ Jailbreak ကိစ္စကို တိုက်ခိုက်ချင်လို့ အခုလို ဆော့ဖ်ဝဲကို ထုတ်လုပ်လာတာပဲလို့ ယူဆချင်ပါတယ်။
Apple တင်လိုက်တဲ့ patent ကိစ္စ တစ်ချက် ပြန်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ သူပြောထားတာကတော့ “Systems and Methods for Identifying Unauthorized Users of an Electronic Device” တဲ့။ အဲဒါ အိုင်ဖုန်း Average user တွေအတွက် ဘယ်လိုသော အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်မှု ရှိသလဲ.....။
ဆိုလိုချင်တာကတော့တစ်ကယ်လို့သာ Apple ကို ဒီလို လုပ်ဆောင်ခွင့်တွေ ခွင့်ပြုလိုက်မယ်ဆိုရင် Apple ဟာ iPhone သုံးစွဲသူများရဲ့ တစ်ကိုယ်ရည် အချက်အလက်များကို လိုသလို ရယူ အသုံးချနိုင်ခွင့် ရှိတယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ပေါက်သွားပါမယ်။ မိမိဘယ်လို ပုံတွေ ရိုက်တယ်၊ ဘယ်လို ဗွီဒီယိုကို ဖန်တီးနေတယ်။ မိမိရဲ့ စကားသံ၊ စတာ စတာတွေကို Apple ကနေ အချိန်ပြည့် စောင့်ကြည့်ခွင့် ပေးလိုက်ရတယ် ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ တစ်ကယ်လို့ ဖုန်းသုံးစွဲသူကို တစ်ခုခုသော အကြောင်းအချက်နဲ့ သံသယ ရှိနေရင် Apple ကနေ ဖုန်းကို Remotely Shutdown လုပ်လိုက်နိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုချင်တဲ့ သဘောပါပဲ။
လောလောဆယ်မှာတော့ Apple ကတော့ အိုင်ဖုန်းကို hacking, modding, jailbreaking စတာတွေ မလုပ်တဲ့ သုံးစွဲသူတွေကို target ထားမှာတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ Apple အဆိုအရတော့ အဲဒီ heart beat monitoring နဲ့ Face recognition ဆော့ဖ်ဝဲဟာ ဖုန်းကို အခိုးခံရတဲ့ အချိန်မှာသာ အသုံးချဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားပါသတဲ့။
Apple က တင်လိုက်တယ် ဆိုတဲ့ Patent Application ကို ဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:01 PM3ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: apple, iPhone, patent, Software
ဒီနေ့မှပဲ အားလို့ Agent ဆီက သွားယူလာတဲ့ S$ 2,200 တန် မြန်မာ ပတ်စ်ပို့ပါ....။
မမြင်ဖူးသေးသူ မြင်ဖူးသည်ရှိအောင် စေတနာ ဗရပွနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံ ကိစ္စ လုံးဝ အစာမကြေပါ။ ကိုယ်ရိုက်သွားပေးတဲ့ ဓါတ်ပုံကို မသုံးပဲ သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာနဲ့ ရိုက်ခိုင်းတာ လူပုံက အဆီပြန် မျက်နှာက ဝအစ်.... နေတဲ့ ပုံ ထွက်လာပါတယ်။ (Web Cam နဲ့ လက်ပတုတ်နဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးတယ်တဲ့.. ကြားလို့ အရပ်ရပ် နေပြည်တော် နားထောင်လို့ ကောင်းကြသေးရဲ့လား ကွယ်ရို့...။) အခုတော့ ရွဲပလဲနေတဲ့ ပုံပါတဲ့ စာအုပ်ကို စာရွက်မကုန်မချင်း သုံးနေရပါတော့မယ်....။ စိတ်လေတယ်။
(အဲဒီနေ့က ပူလဲပူ အဲယားကွန်းလဲ ပိတ်ထားလို့ လှောင်အိုက်နေတော့ ဘယ်ပုံ ထွက်မယ်ဆိုတာ မြင်ယောင်ကြည့်ပါလေ...။)
သဉ္ဇာအေးလို ကင်မလာ အကောင်းစား မရှိတော့ တုန်မှုန်ဝါး ဖုန်းကင်မရာနဲ့ ရိုက်တင်ပေးလိုက်ရတာကို ခွင့်လွှတ်ပါ...။
KOM ကို အားကျလို့တော့ မဟုတ်ပါ....။
စကားမစပ် ပီဂျေးအမ်အမ်အာ ဆိုတာ ဘာလဲဟင်....။
Chip ပြားလေးတော့ စာရွက်ပေါ်မှာ မြုပ်ထားတယ် ပြောတာပဲ။
စင်ကာပူ လေဆိပ်ကို စာအုပ်အသစ်နဲ့ ပြန်ဝင်လာတဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ပြောပြတာကတော့ လဝက ဆီမှာ တန်းစီစရာ မလိုပဲ စင်ကာပိုးရီးယန်းများ စက်နဲ့ စကန်ဖတ်တဲ့နေရာကနေ ဖြတ်လာလို့ရတယ် ပြောတယ်။
(စလုံးမှာ နေထိုင် အလုပ်လုပ်သူများအတွက်သာ အကျုံးဝင်သည် ထင်တာပဲ...။)
စာကြွင်း ။ ။ ပြောဖို့ မေ့သွားလို့... ကွန်ပြူတာ စကရင်ကို စောင်းရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ခေါင်းကို နည်းနည်းလေး ငဲ့စောင်းလိုက်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပေးပါ။ ပုံတွေက ရိုက်တုန်းက အတည့်ကို ဘယ်လို ဘေးတိုက် ဖြစ်သွားလဲ မသိဘူး...။ ဟိဟိ..။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:54 PM 11 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: Myanmar, Passpost
How to use "Places" on FaceBook in iPhone with "Ho...
Daw Aung San Suu Kyi's Speech (14 Nov 2010, Sunday...
"New ButterFly Dream " : Justic Pao's Movies Theme...